Edit Style Sheet - MYSTERY ZILLION
January 2011 edited January 2011 in PHP
တကယ်လို့ ကိုယ့်ဆိုက်မှာ Admin panel ရှိခဲ့ပါက အဲ့ admin panel ကနေ css ကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုပါက အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
$po = $_POST['edit'];
$myfile = ("style.css");
$open = fopen($myfile ,'w+');
$latest = fwrite($open, stripslashes($po));
<textarea name="edit" cols="40" rows="15" id="edit">
$open = fopen($myfile ,'r');
$late = fgets($open);
print $late ;
<input type="submit" name="Submit" value="Edit">
ဘယ်ဟာရဲ့ ဘယ် panel ကို က ဘာတွေ တုန်း .
တေတေချာချာ သင်ပေး . နာ အဲဒါတွေ တိဘူး ဟ
အဲ ဆရာက နောက်ပြီ.... FCK editor တို့ လိုလေ.အဲ့သဘောမျိုးပါ..admin panel ရှိရင် အဲ့ကနေတဆင့် ပြင်လို့ရအောင်လို့ပါ... အစီစဉ်တော့ကျဘူးဗျ.. အလုပ်တော့ဖြစ်တယ်..ကိုယ်တွေ့ နဂို ရှိပြီးသား css တစ်ခုလုံးပျက်တဲ့အထိပဲ ဟီး အစမ်းလွန်သွားတာ ဆရာရ
ဒါဖြင့် အခု လက်ရှိက css ပြင်ဖို့ ဘာ editor သုံး တာတုံး .
text editor တစ်ခုခု မသုံးပဲ ရိုးရိုး . plain text ပဲ သုံးတာလား
plain text ကပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်
text editor တွေ က enter ခေါက်ရင် အထဲမှာ p tag ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေ .
လိုချင်တာ က css editor စစ်စစ်ကို လိုချင်တယ် web ပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်ပြင်တာကို ပြောတာနော်
space လေးရိုက်လိုက်တာနဲ့ dream weaver ထဲက အတိုင်း dropdown လေး ကျလာရော . ဟီးဟီး
ရမလား မရဘူး လားပဲပြော
အခုက ဘာမှသုံးဘူးလေ..Dream Weaver နဲ့ပဲပြင်နေတာ...
အဲ့လိုတော့.... ဟိဟိ.... ရ မရ မသိသေးဘူးဗျ...
need to add autocomplete
recommend codemirror :P